မိခင်တွေ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ထုတ်ပြောပြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ S.H.E ရဲ့ မန်ဘာ အယ်လာချန်း – For her myanmar
မိခင်တွေ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ထုတ်ပြောပြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ S.H.E ရဲ့ မန်ဘာ အယ်လာချန်း
Posted on May 13, 2019 Author Ei Mon	Comment(0)
ယောင်းတို့ရေ S.H.E ထဲက အယ်လာ့ကို မှတ်မိကြသေးလား? 90’s kids တွေရဲ့ အသည်းစွဲ You are my Super Star သီချင်းကို ဆိုခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဒါမှ မသိသေးဘူးဆို Hana Kimi (To the Beautiful You တရုတ်ဗားရှင်း) ထဲက မင်းသမီးလေးပေါ့… အယ်လာဟာ မလေးရှား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အယ်ဗင်လိုင် (Alvin Lai ) နဲ့ လက်ထပ်ပြီး သားတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
အိမွန်ပြောချင်တာ ခုမှ စပါပြီ။ အသက် (၃၇) နှစ် အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်အမေဖြစ်တဲ့ အယ်လာရဲ့ ကလေးမွေးပြီး ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာက ဆီးမထိန်းနိုင်တာပါပဲ။ သားလေး ဒန်နီရယ်ကို မွေးတဲ့အချိန်မှာ ဆီးအိမ်နဲ့ သားအိမ်က လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်သွားပြီး ဆီးအားကို မထိန်းနိုင်တာကြောင့် ဆီးအိမ်ကျွံတဲ့ သဘော ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နှာချေရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ခုန်တာ ၊ ပြေးတာတွေ လုပ်မိရင် ဆီးက အလိုလို ထွက်တဲ့ ပြဿနာပေါ့..
ဒါမျိုးက ကလေးမွေးပြီးတဲ့ မိခင် တော်တော်များများမှာ ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ လူသိမခံချင်လို့ တိတ်တိတ်လေး ဖြေရှင်းကြတာ များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အယ်လာကတော့ ဒါဟာ ထိန်ချန်ထားရမယ့် ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ မိခင်တစ်ယောက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာဆိုတာ အားလုံးသိသင့်တယ်။ ဒါမှ မိခင်တွေကို စာနာတတ်မှာဆိုပြီး အားလုံးလည်း သိရအောင် တရားဝင်ပို့စ်တင်ပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ပြီး ကျွံကျနေတဲ့ ဆီးအိမ်ကို ကြိုးနဲ့ မြှောက်တင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့.. ခုတော့ ဒီပြဿနာက ငြိမ်းသွားပါပြီ။
For her Myanmar က မိခင်လောင်း ယောင်းလေးတို့ကို အိမွန် ပြောချင်တာက ဒါက ရှက်စရာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကလေးမွေးပြီးတဲ့ မိခင်တွေမှာ ဖြစ်တတ်လို့ အချိန်မီလေး ကုသမှု ခံလိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒါဟာ ကျန်းမာရေးကိစ္စတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်သွေးသားကို မွေးဖွားပေးတာကြောင့် ဖြစ်လာရတာမို့လည်း ဒါဟာ ပြောရမယ်ဆို ဂုဏ်ယူသင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲလို့…
References : asianbuzz,wiki
ယောငျးတို့ရေ S.H.E ထဲက အယျလာ့ကို မှတျမိကွသေးလား? 90’s kids တှရေဲ့ အသညျးစှဲ You are my Super Star သီခငျြးကို ဆိုခဲ့တဲ့ အဖှဲ့ထဲက တဈယောကျပါ။ ဒါမှ မသိသေးဘူးဆို Hana Kimi (To the Beautiful You တရုတျဗားရှငျး) ထဲက မငျးသမီးလေးပေါ့… အယျလာဟာ မလေးရှား စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ အယျဗငျလိုငျ (Alvin Lai ) နဲ့ လကျထပျပွီး သားတဈယောကျထှနျးကားခဲ့တာ ကွာခဲ့ပါပွီ။
အိမှနျပွောခငျြတာ ခုမှ စပါပွီ။ အသကျ (၃၇) နှဈ အရှယျ ကလေးတဈယောကျအမဖွေဈတဲ့ အယျလာရဲ့ ကလေးမှေးပွီး ဖွဈလာတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာက ဆီးမထိနျးနိုငျတာပါပဲ။ သားလေး ဒနျနီရယျကို မှေးတဲ့အခြိနျမှာ ဆီးအိမျနဲ့ သားအိမျက လြော့တိလြော့ရဲ ဖွဈသှားပွီး ဆီးအားကို မထိနျးနိုငျတာကွောငျ့ ဆီးအိမျကြှံတဲ့ သဘော ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နှာခရြေငျပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ ခုနျတာ ၊ ပွေးတာတှေ လုပျမိရငျ ဆီးက အလိုလို ထှကျတဲ့ ပွဿနာပေါ့..
ဒါမြိုးက ကလေးမှေးပွီးတဲ့ မိခငျ တျောတျောမြားမြားမှာ ဖွဈတတျပမေဲ့ လူသိမခံခငျြလို့ တိတျတိတျလေး ဖွရှေငျးကွတာ မြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အယျလာကတော့ ဒါဟာ ထိနျခနျြထားရမယျ့ ပွဿနာမဟုတျဘူး။ မိခငျတဈယောကျ ရငျဆိုငျရတဲ့ ပွဿနာဆိုတာ အားလုံးသိသငျ့တယျ။ ဒါမှ မိခငျတှကေို စာနာတတျမှာဆိုပွီး အားလုံးလညျး သိရအောငျ တရားဝငျပို့ဈတငျပွီး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ နောကျပွီး ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ ခှဲစိတျကုသခဲ့ပွီး ကြှံကနြတေဲ့ ဆီးအိမျကို ကွိုးနဲ့ မွှောကျတငျထားခဲ့ရပါတယျတဲ့.. ခုတော့ ဒီပွဿနာက ငွိမျးသှားပါပွီ။
For her Myanmar က မိခငျလောငျး ယောငျးလေးတို့ကို အိမှနျ ပွောခငျြတာက ဒါက ရှကျစရာ ကိစ်စမဟုတျပါဘူးနျော။ ကလေးမှေးပွီးတဲ့ မိခငျတှမှော ဖွဈတတျလို့ အခြိနျမီလေး ကုသမှု ခံလိုကျရငျတော့ အဆငျပွသှေားမှာဆိုတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ဒါဟာ ကနျြးမာရေးကိစ်စတဈခုသာ ဖွဈပွီး ကိုယျ့သှေးသားကို မှေးဖှားပေးတာကွောငျ့ ဖွဈလာရတာမို့လညျး ဒါဟာ ပွောရမယျဆို ဂုဏျယူသငျ့တဲ့ ကိစ်စတဈခုပါပဲလို့…
Tagged birth, Ella Chen, Health, incontinence, urinary
ညအချိန်မှာ ခံစားရသည့် စိတ်ဓာတ်ကျဝေဒနာ
Posted on January 29, 2019 January 29, 2019 Author For Her Myanmar
Posted on February 7, 2019 Author For Her Myanmar
အရမ်းကို ခံစားရတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း ဒါကိုပဲ အမြဲတမ်းတွေးပြီး ဝမ်းနည်းနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးမလား…
Posted on June 28, 2018 July 25, 2018 Author မယ်တင် (ဆေး-၁)